JOHNNY DEPP 650 M $ GON GONE! - MUUQAAL - TELES RELAY
ACCUEIL » VIDEOS JOHNNY DEPP 650 M $ GON GONE! - VIDEO
JOHNNY DEPP 650 M $ GON GONE! - VIDEO
JOHNNY DEPP 650 Bilyan oo DILLARS GONE
► SHAQADA LABAAD RIIX EE RIIX: https://youtu.be/tjaBjfhie5U
D DUKAANKA VLOG: https://www.youtube.com/watch?v=jbYlJWo4iZE
Joornaalka dhagaxa cusub ee duubista ayaa hadda ku dhawaaqay nasiib wanaagga '650 MLN' ee uu qoray Johnny Deeps. Ku dhowaad way dhammaatay - aan quusno!
Wuxuu ka dacweeyay kooxda maaraynta TMG noocyo kala duwan oo ah bixinta iyo khidmadaha dambe ee muuqda oo la xiriira malaayiin doolar oo ah inuusan ka warqabin diiwaannada maxkamadda.
Sida muuqata, Johnny wuxuu ku toogtay ku dhawaad ​​650 milyan oo doolar filimada keenay 3,6 bilyan.
Waxay bilaabatay qiyaastii Oktoobar 2016, markii gurigiisa Los Angeles la qabtay oo maamulkiisuna faragelin ku sameeyeen, taasoo micnaheedu yahay in macaamil macaamil ganacsi aan la shaacin. Sida xogta laga helayo, wuxuu kharash gareeyey 2 milyan oo doollar bishii, kaasoo aan awoodin inuu awoodo.
Iyo khidmadaha maareynta waxaa ka mid ah wax soo iibsashada sida:
Waxaa jiray 75 milyan oo doolar oo loogu talagalay guryaha 14. Wuxuu ku kharash gareeyay 3 milyan oo doolar si uu u gubo dambaskiis saaxiibkiis Hunter S. Thompson. Kaliya 7 000 $ inay ka iibsato gabadhiisa sariir taxane ah oo cinwaan looga dhigay Sii wadidda Kardashians. Wuxuu iibsaday qaar ka mid ah gitaarrada 70 iyo 200 farshaxanimada farshaxanka, oo ay ku jiraan Basquiats iyo Warhols, oo ay leeyihiin gawaarida raaxada ee 45 waxayna ku kharash gareen 200 $ 000 bishiiba safarka hawada gaarka loo leeyahay.
Johnny Depp wuxuu sheegay inuu aaminay maamulka oo uu saxeexay dukumintiga asaga oo aan mararka qaar arkin waxa uu ahaa.
Sannadihii 30 ee meheradda, ma jiro macmiil kale oo ka sheeganayay sida ka soo horjeedda TMG, waxay leeyihiin.
Si kastaba ha noqotee, waxaa jira xanta badan iyo kan afaraad iyo kan ugu dambeeya ee u dhexeeya Depp iyo maamulkiisa.
Laakiin macnaha vlog-ka maanta ayaa ah in la hubiyo inaad si buuxda gacanta ugu hayso dhaqaalahaaga, inaad si xikmad leh u maalgaliso lacagtaada, maxaa yeelay xitaa nasiib weynida nin sida Johnny Depp ayaa waayi kara dhowr sano!
Waad ku mahadsan tahay daawashada iyo aragtidaada berrito!
Fiidiyowga marka hore wuxuu u muuqday https://www.youtube.com/watch?v=5aflzolBVac
A skyscraper of 40 milyan oo doolar oo loogu talagalay David Backham iyo afadiisa - VIDEO
Tilmaamaha: XAALADAHA MAANTA 35 XAALAD GIRL WUXUU KA QAADAN KARAA